Generation 3ဆက်မှာအကျော်ကြားဆုံးCh3 ရဲ့Drama Couple(၉)တွဲ – Taung Gyi
Generation 3ဆက်မှာအကျော်ကြားဆုံးCh3 ရဲ့Drama Couple(၉)တွဲ
Thai Ch3 ရဲ့ဒီDrama Couple တွေကတော့generation 3ဆက်မှာနာမည်အကျော်ကြားဆုံးအတွဲတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။တစ်ချို့Drama Couple တွေကတော့Real Life မှာပါအခြားသူတွေအားကျရတဲ့စုံတွဲလေးတွေဖြစ်နေပါပီ။
Ken Theeradeth နဲ့Anne Thongprasom
2006 ရဲ့Drama ဖြစ်တဲ့“Oum Ruk” မှာအလုပ်တူတူလုပ်ပီးနောက်Ken Theeradeth နဲ့Anne Thongprasom တို့ဟာအရမ်းလိုက်ဖက်တဲ့Drama Couple ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်2008 ရဲ့အကျော်ကြားဆုံးDrama ဖြစ်တဲ့“Sawan Biang” မှာအတူပြန်ပီးသရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မကြာခင်မှာပဲ “Sup Tar 2550” Drama နဲ့Fan တွေရှေ့ပြန်လည်ရောက်ရှိလာဦးမှာပါ။ဒီလာမဲ့Drama ရဲ့producer ကတော့Ken Theeradeth ပဲဖြစ်ပါတယ်။
2. Ch3 ရဲ့ထိပ်တန်းသရုပ်ဆောင်များ
Nadech Kugimiya နဲ့Yaya Urassaya
2010 ရဲ့Drama ဖြစ်တဲ့“Duang Jai Akkanee” Drama မှာသရုပ်ဆောင်ခဲ့ပီးနောက်Nadech Kugimiya နဲ့Yaya Urassaya တို့ဟာPopular Drama Couple ဖြစ်လာပါတယ်။မကြာခင်မှာပဲ “Lai Kinaree” Drama မှာသူတို့Couple ကိုထပ်တွေ့ရဦးမှာပါ။
နောက်ထပ်နာမည်ကျော်ကြားတဲ့Drama Couple တွေကတော့
Mark Prin နဲ့Kimmy Kimberley
James Jirayu နဲ့Bella Ranee
James Jirayu နဲ့Taew Natapohn
Pope Thanawat နဲ့Bella Ranee
Pope Thanawat နဲ့Mew Nittha
3. Ch3 ရဲ့Raising star များ
Pon Nawasch နဲ့Bua Nalinthip
2018 ရဲ့Popular Drama ဖြစ်တဲ့“Tra Barb See Chompoo” ထဲကPon Nawasch နဲ့Bua Nalinthip တို့ရဲ့နွေးထွေးတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုကြည့်ရှုသူတွေကအသိအမှတ်ပြုခဲ့ပါတယ်။2021 မှာတော့“Praomook” Drama နဲ့တူတူFan တွေရှေ့ပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။
August Vachiravit နဲ့Namfah Thunyaphat
“Mae Krua Kon Mai” Drama မှာပထမဆုံးအကြိမ်Couple အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပီးနောက်August Vachiravit နဲ့Namfah Thunyaphat တို့ဟာအရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့Drama Couple ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။မကြာခင်မှာနောက်ထပ်Drama တစ်ခုနဲ့Fan တွေရှေ့ပြန်လည်ရောက်ရှိလာဖို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။
Previous Article ဆင်းရဲလို့အစိုးရဆီကစားစရိတ်ထောက်ပံ့ကြေးနဲ့ခက်ခဲစွာရှင်သန်ခဲ့ဖူးတဲ့Kim Se-jeong
Next Article Kim Jong-kook နဲ့Song Ji-hyo တို့လျှို့ဝှက်ပီးDate လုပ်နေတယ်လို့ထင်နေတဲ့Ji Suk-jin